Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu qabtay agagaarka isgoyska Cali-Kamiin ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu qabtay agagaarka isgoyska Cali-Kamiin ee Muqdisho
Ciidamada nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa habeenkii xalay gacanta ku dhigay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay kadib howlgalo culus ay ka sameeyeen xaafadaha degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho.
Gaarigaan oo noociisa la sheegay inuu ahaa KAARIB ayaa lasoo dhigay agagaarka isgoyska Cali-Kamiin ee degmada Wardhiigley, waxaana ugu dambeyn la wareegay ciidamada nabad-sugidda oo ay u suurto gashay inay kala fur-furaan dhamaan waxyaabihii qaraxa ka sameysnaa ee saarnaa gaariga.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidanka ay gaarigaasi gacanta ku dhigeen, kadibne ku guuleysteen inay gaariga ka furaan qaraxii ku xirnaa.
Ilaa iyo haatan ma jirto cid loo soo qab-qabtay falkaan, waxaana howlgaalkaan uu ka mid yahay howlgalada ay ciidanka nabad-sugidda kaga hortagaan qaraxyadda ay Al-shabaab ka damacsan yihiin inay ka geystaan magaalada Muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee, gaarigaan la qabtay ayaa kusoo beegmaya xilli muddo dhowr maalmood kahor gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay lagu weeraray maqaayada Banaadir Beach ee ku taala Xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.